Kwete vashandisi vakangwara vanochera iyo iPhone 7, nei? | Ndinobva mac
Kwete vashandisi vakangwara vanochera iyo iPhone 7, nei?
Yakafananidzwa | | Rumo
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti vanhu ndiyo yega mhuka inokanganisa kwete kaviri, asi kusvika kanomwe ka7 nebwe rimwe chete. Isu tiri mapenzi nemasikirwo, izvo zvinofanirwa kuzivikanwa. Takatanga kuyedza kukotama iyo iPhone 6 kuti tione kana zvichinyatsoita. Ipapo mumwe munhu anoti iwo ma6 anokurumidza kuchaja, asi kuti zvinoitwa mu microwave. Iye zvino vashandisi vaenda zvakatowedzera. Dai zvaive zvisiri pachena kare kuti aya mafashoni uye makuhwa hupenzi, imwe nyowani inobuda kuzoyedza uye kuzviratidza. Ndezvei? Kubva kuchera iyo iPhone 7.
Kwete, hausi muyedzo wekutsungirira kana kutambudzwa kwevaraidzo uye kwete kuyedza kuona zvinoitika. Kune vanhu chaivo vanofunga kuti zvichabatsira. Chii chaunoda kuzadzisa nekuboora iyo iPhone 7 kana 7 pamwe ne drill? Gadzira headphone jack chiteshi senge iwo apfuura mamodheru. Ndini ndega ndakaziva kuti izvi kupenga uye kuti izvi zvinongoparadza mudziyo wako? Ngatitaurei nezvenyaya iyi, kuti yakauya sei uye zvakadii nezve damn headphone jack port uye chishuwo chisingaiti chevashandisi.
1 Imba jack chiteshi che iPhone 7
2 Zvinotendeseka, kune vanhu vanoedza
Imba jack chiteshi che iPhone 7
Zvandaida kuona. Kana zvirizvo hazvigone kupusa. Zvakanaka, kuisa iyo iPhone mu microwave uchifunga kuti ichabhadharisa nekukurumidza hakugone, asi izvi zvakare kusahadzika ramangwana revanhu. Izvo zvese zvakamuka kubva kune mumwe wevaya vanhu vanoisa mavhidhiyo paInternet uyezve vanobhadharisa kushambadzira. Ini handisi kuzotaura zita rake nekuti zvakakwana nezvaanotaura nezvenyaya iyi Handichadi kuzvishambadza zvekare.
Iyo poindi ndeyekuti yakaonekwa ichiisa iyo nyowani iPhone 7 yakanyatsobatanidzwa uyezve ne drill ine 3,5 millimeter tip yakaita gomba diki munzvimbo yepazasi. Imo chaipo munzvimbo iyo gore rino tisina kuona jack chiteshi, asi wechipiri mutauri. Wobva wavhara mahedhifoni uye wapedza. Kuti unakirwe nemumhanzi wako, ehe, kana chishandiso chikasaputika nekupfuura nebhatiri kana chimwe chinhu chine njodzi, hongu.
Ngatione, ngativei serious. Iko hakuna nzira iyo mahedhifoni anogona kushanda nekungobaya baya mumuviri wefoni. Iko hakuna zvinoriumba mukati mechishandiso chakakodzera kuti chishande. Iwe hausi kuwedzera adapta kana kuchinja Hardware. Iwe uri kungobaya gomba mualuminium uye izvo zvikamu. Zvinoita sekunge unocheka gomba muhudyu yako kuti ushande senzira yechipiri yekutiza yedumbu rako. Izvo hazvishande zvakadaro. Hupenzi.
Zvinotendeseka, kune vanhu vanoedza
Zvine musoro kuti munhu akaisa vhidhiyo yacho anoziva kuti haishande. Iye anoziva kuti izvo zvaakaita idambe, asi izvo zvinokwezva vashanyi uye zvine nharo. Chinhu chinokatyamadza hachisi chekuti anozviita uye kuti anoparadza iyo iPhone 7 yacho, vamwe vazhinji vanorekodha mavhidhiyo vachiyedza kuramba kana kutsemura iPhone nehafu nesaha. Chinondirova uye chinoita kuti ndinetseke hunhu ndechekuti kune vamwe vanozvitenda.
Wow, ini ndakangoshandisa inodarika $ 700 pafoni. Wow, ini ndoda kushandisa mahedhifoni mahedhifoni asi ini handifarire iyo adapta. "Zvirinani utore chiboorera woigadzirira chiteshi, Apple yakanganwa gomba." Kunyanya? Pane munhu anogona kufunga saizvozvo? Ndizvozvo. Zvinoshamisa kuti kune avo vakaedza. Ndinoda kutenda kuti vakazviita kuti vatevere jee Uye kuti ivo vaiziva nguva dzese dzemhedzisiro, asi… Iyi iAmerica, vakomana. Nyika yaunowana zvombo nenyaya yemazuva matatu uye uko chero hupenzi huchiitwa pasina kufunga. Ikozvino zvinondikodzera kuti vanoita balcony pavanouya kuTorrevieja.
Ndapota. Semunhu mushandisi, mupepeti uye fan yechiratidzo, ndinokubvunza. Funga usati wateerera zano rakadai kuti uboore iyo iPhone. Usaiise mu microwave kana kuisa kushorwa kwayo kune iyo muganho kana iwe usiri kuda kurasikirwa yako nyowani iPhone 7. Iyo waranti haifukidze hupenzi hwevanhu. Ndinovimba havaite zvakafanana naye Apple Yekuteedzana 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Kwete vashandisi vakangwara vanochera iyo iPhone 7, nei?
Apple Music Festival, Apple Watch Series 2 chiziviso, macOS Sierra kuenderana, uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac
Mashandisiro ekushandisa echinyakare 3D Kubata zviito muIOS 10 (II)